Myanmar IT Resource Forum » GENERAL TECHNOLOGY » » Hardware Knowledge » Ghost ရိုက်နည်း
1 Ghost ရိုက်နည်း on 19th January 2010, 2:50 pm
Ghost ရိုက်နည်းကို မပြောခင်မှာ ဘာဖြစ်လို့ရိုက်ကြသလဲ ???
Window တစ်ခါတင်မယ် ဆိုရင် ဘယ်လောက် performance ကောင်းတဲ့ PC ပဲဖြစ်ပါစေ ၊ အနည်းဆုံး မိနစ် ၂၀ လောက်ပေးရမယ်။ နောက် သူ့ကို ကိုယ်နဲ့ ကိုက်စပ်မှုရှိအောင် Zawgyi font , anti virus , auto run killer , neo , win zip ............. စုံသကာ စိ လိုက်ထည့်ရမှာလေ။ အဲဒီ့တော့ ကိုယ့်မှာ လိုအပ်တဲ့ ဆောဖ့်ဝဲလ်တွေ ဘယ်လောက်ရှိရှိ ၊ အနည်းဆုံး ၂ နာရီလောက်တော့ အချိန်ပေးရမယ်။ အင်း တကယ်လို့ ကိုယ်က အဲဒီ့ ၂ နာရီဆိုတဲ့ အချိန်နဲ့ စက်တစ်လုံးကို ထိုင်လုပ်တာ က အရေးမကြီးဘူးလေ။ Portal LAN Game လို စက်အလုံးပေါင်း ၉၉ လုံးကျော်ရှိတဲ့ နေရာမှာ window လိုက်တင်ပေးရမယ်ဆိုရင် အဲဒီ့လိုထိုင်တင်ပေးမလား။ ဒါဆိုရင်တော့ တစ်နှစ်လောက် အချိန်ပေးရမယ့်ပုံပေါ်တယ်။ ဒီတော့ ကိုယ်က စက်တစ်လုံးကို ပဲ ၂နာရီလောက်အချိန် ပေးပြီး တင်လိုက်။ ကျန်တာကတော့ Ghost ဆွဲလိုက်ပေါ့။(သူများတွေပြောတဲ့ လေသံ :find )
ကဲ ဆွဲခိုင်းပါပြီတဲ့.... ကိုယ့်ဘက်က ဘာတွေလိုမလဲ ???
တကယ်လို့ ဒီ Tut ကိုဖတ်ပြီးလိုက်စမ်းမယ်ဆိုရင် ကသိကအောက်တော့ ဖြစ်လိမ့်မယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ပထမတစ်ချက်က Ghost ဟာ GUI ပေါ်မှာ အလုပ်မလုပ်နိုင်ပါဘူး။ cd နဲ့ boot တက်ပြီးမှ အသုံးပြုလို့ရတဲ့ software ဖြစ်နေလို့ပါ။ နောက်ပြီး သူက HDD တွေကို လုပ်ရတာဆိုတော့ ကိုယ့်စက်မှာ HDD တွေနှစ်လုံးလောက်ရှိတယ်ဆိုရင်တော့ ပြန်စမ်းရင် အဆင်ပြေတယ်။ ဒါပေမယ့် တစ်လုံးထဲဆိုရင်တော့ နည်းနည်း အဆင်မပြေဘူးပေါ့ဗျာ။ မေးခွန်းတောင် ပျောက်သွားတယ်။
လိုတာကတော့ Computer ပေါ့ ။ Ghost ရိုက်ပုံရိုက်နည်းက တစ်ခါတည်း တန်းရိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ Disk to Disk Function နဲ့ Partition to Partition Function ကို သုံးရပါမယ်။ ဒီလိုသုံးမယ်ဆိုရင်တော့ ကန့်သတ်ချက်တွေကရှိလာပြီ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ သူက HDD ကြီးတစ်ခုလုံး ၊ Partition ကြီးတစ်ခုလုံး ကို နောက်တစ်လုံးဆီကို ကော်ပီပွားပြစ်မှာလေ။ အဲဒီ့လိုပွားလိုက်မယ်ဆိုရင် ပထမက ကိုယ်ရိုက်လိုက်တဲ့ စက်နှစ်လုံးရဲ့ Motherboard brand , model no: တူဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ နောက်တစ်ခုက Motherboard ပေါ်က North Bridge , South Bridge စတဲ့ Chip တွေကိုထုတ်လုပ်ပေးလိုက်တဲ့ Company (intel , vaio ) လိုမျိုးပေါ့။ နောက်တစ်ချက်က HDD နှစ်လုံးက brand , model no: တူဖို့လည်းအရေးကြီးပါတယ်။ ကျန်တာတွေကတော့ မတူလည်းရပါတယ်။ အခုပြောတဲ့ Motherboard , HDD တွေတူရမယ်ဆိုတာက ကိုယ်က Diisk to Disk , Partition to Partition နဲ့ တစ်ခါတည်းတန်းပြီး Ghost ဆွဲမှာမို့လို့ပါ။ စပြီး Ghost ဆွဲကြည့်ကြရအောင်။ ပထမဦးဆုံး ghost cd ခွေလိုပါလိမ့်မယ်။ ဒီနေရာမှာ ကျနော်တို့ သုံးတာ Norton ကိုပဲသုံးတယ်။ ဒီနေရာမှာလည်း အခက်အခဲက ရှိလာပြန်ပြီ။ ဘာအခက်အခဲလည်းဆိုတော့ ကျနော်တို့ ဒီကနေပြီးတော့ download ဆွဲဖို့အတွက် link ကိုရှာလို့မရဘူး။ ရှိလည်းမရှိဘူးဗျ။ မနေ့တုန်းကတော့ သင်တန်းကနေ ghost exe ဖိုင်လေးတောင်းလာတယ်။ အဲဒါကို ပြန်ပေးလို့တော့ရတယ်။ ဒါပေမယ့် cd နဲ့ boot တက်ပြီးသုံးမယ်ဆိုရင် bootable cd ပြုလုပ်ရမယ့် ပြဿနာကရှိလာပြန်ရော။ သင်တန်းမှာကတော့ မိုက်တယ်။ Dual Boot တွေနဲ့လေ။ ဒီတော့ C: ထဲမှာ boot file တွေအားလုံးစုပြီးထည့်ထားလိုက်တယ်။ အဲဒီ့ ghost ရော။ window တက်ရင် microsoft window ကနေ သွားပြီး ghost ရိုက်လိုက်ရော။ ကဲ ထားပါ။ ကိုယ့်ဆီမှာတော့ Ghost ခွေရှိရမယ်နော်။ ရိုက်မယ်ဆိုတာနဲ့ CMOS ထဲက First Boot Device ထဲမှာ CD Rom ကိုကြော်ငြာ၇မယ်။ ပြီးရင် CD လေးထည့်လိုက်ပေါ့။ အဲဒီ့မှာ ကိုယ်ထည့်လိုက်တဲ့ CD ကနေ ghost ဆီသွားဖို့ browse လုပ်ပေးရမယ်။ Browse က GUI မှာဆိုရင်တော့ လွယ်တယ်။ mouse လေးနဲ့ ရွေးပေးလိုက်ရုံပဲ။ CUI မှာကြတော့ ကိုယ်က လမ်းကြောင်းရှာပေးရတယ်။ အဲဒီ့လိုရှာမယ်ဆိုရင် နံပါတ် ၁ က ကိုယ့် CD Drive ရှိတဲ့ letter ကို ရိုက်ပါ။ နောက်မှာ ၀စ္စနှစ်လုံးပေါက် ပုံစံ)ဒါလေးထည့်ရိုက်။ ပြီးရင်တော့ cd ghost ဆိုပြီးသာရိုက်ချလိုက် ။ အဲဒါအလွယ်ဆုံးပဲ။ ဒီအထိမှာ မရှင်းတာရှိရင်ပြောပါ။ ဥပမာ First boot drive ဘယ်လိုကြော်ငြာရလဲဆိုတာက အခုမှ ကွန်ပျူတာကို စလေ့လာနေတဲ့သူတွေ ၊ window မတင်တတ်တဲ့သူတွေအနေနဲ့တော့ ဘာမှန်းကိုသိမှာမဟုတ်ပါဘူး။ နောက်မရှင်းတာရှိရင်လည်းပြောပါ။ ကျနော် အတတ်နိုင်ဆုံးပြန်ရှင်းပြပေးပါ့မယ်။ ဒီ tut ကိုဖတ်ပြီးတာနဲ့ ကျနော်ကတော့ ghost မရိုက်တတ်တဲ့သူတွေအားလုံးကို ၊ ghost ရိုက်တတ်သွားစေချင်တဲ့ ရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုတည်းနဲ့ရေးတာပါ။ နောက် ghost ခွေမရှိဘူးဆိုရင်လည်း ဒီမှာပဲ တောင်းလို့ရပါတယ်။ ကျနော်တို့ ဆီမှာ အလကားလာယူလို့လည်းရပါတယ်။
ကျနော်ပြောဖို့နည်းနည်းကျန်သွားတယ်။ တကယ်လို့ ကိုယ့်မှာ Motherboard brand , model no: မတူဘူးဗျာ။ HDD ကလည်း မတူဘူး။ ဒါဆိုရင်တော့ ကိုယ် Ghost ရိုက်ချင်တဲ့ file တွေကို ပထမဆုံး ghost image ဆိုပြီးအရင်ရိုက်ရမယ်။ ဒီနေရာမှာလည်း HDD ကြိးတစ်ခုလုံးကို Ghost Image အဖြစ်ရိုက်နိုင်သလို ၊ Partition တစ်ခုတည်းကိုပဲ Ghost Image ရိုက်လို့ရပါတယ်။ အဲဒီ့လို image ရိုက်ပြိးမှ နောက် HDD တစ်လုံးထဲကို အဲဒီ့ Image ဆွဲထားတဲ့ Image File လေးကို ပြန်ပြီး Ghost ရိုက်ပေးလို့လည်းရပါတယ်။ ရိုက်နည်းကလည်း ဘာမှ မခက်ပါဘူး။ အဲဒါကိုတော့ နောက်တစ်ခေါက်မှ ပုံနဲ့ပြမယ်။
2 Re: Ghost ရိုက်နည်း on 19th January 2010, 4:52 pm
ပုံနဲ့ ထပ်ရှင်းပြမယ်ဆိုတော့ ပိုကောင်းတာပေါ့
3 Re: Ghost ရိုက်နည်း on 19th January 2010, 6:04 pm
4 Re: Ghost ရိုက်နည်း on 19th January 2010, 9:51 pm
Bro Check this error for other member.
5 Re: Ghost ရိုက်နည်း on 20th January 2010, 7:39 am
တစ်နေ့ ကို သုံးခါလောက်ဖတ်ဖို့ အားမွေးထားလိုက်ဦးမယ်
6 Re: Ghost ရိုက်နည်း on 22nd January 2010, 1:49 pm
Permission တွေ ပြန်စစ်ထားပါတယ်။
ပုံတွေ မြင်ရလောက်ပြီလို့ ထင်ပါတယ်။
7 Re: Ghost ရိုက်နည်း on 22nd January 2010, 2:59 pm
ကျွန်တော့် ဆီ မှာ 0NE KEY GHOST ဆိုတဲ့ PORTABLE SOFTWARE လေး ရှိတယ် အပေါ် က ATTACKER က ရှင်းပြသွားတာတွေအားလုံး ဘာ မှ လုပ်စရာ မလိုတော့ဘူး BUTTON တစ်ချက် နှိပ်တာ နဲ RESTART ကျ သွားပြီး
ONE KEY GHOST ကို ရွှေးလိုက်တာ နဲ့ AUTO GHOST ရိုက်ပေးတာ.........ပြန်ဖြည် ချင်လည်း BUTTON တစ်ချက်နှိပ် ရုံဘဲ.........ကျွန်တော်လည်း လက်ရှိ အဲဒီ
ONE KEY GHOST ဘဲ သုံးနေတာ အားလုံးအဆင်ပြေတယ်............
8 Re: Ghost ရိုက်နည်း on 22nd January 2010, 3:50 pm
မသိတာ မေးဖို့ တောင် ဘယ်ကစမေးရမှန်းမသိဘူး
ရှင်းပြတဲ့ သူတွေ အားမရှိတော့ဖြစ်တော့မှာပဲ
ဥာဏ်မီအောင် နဲနဲ အချိန်ယူလိုက်ဦးမယ်နော်
9 Re: Ghost ရိုက်နည်း on 22nd January 2010, 3:53 pm
Manual အဆင်မပြေရင် ကို mrzingyi007 ပေးတဲ့ကောင်လေး စမ်းကြည့်ပေါ့။
Click တစ်ချက် နှိပ်ရုံဘဲဆိုဘဲ။ လွယ်မှာပါ စမ်းကြည့်လိုက်ပါ။
10 Re: Ghost ရိုက်နည်း on 22nd January 2010, 3:59 pm
mrzingyi007 wrote: ကျွန်တော့် ဆီ မှာ 0NE KEY GHOST ဆိုတဲ့ PORTABLE SOFTWARE လေး ရှိတယ် အပေါ် က ATTACKER က ရှင်းပြသွားတာတွေအားလုံး ဘာ မှ လုပ်စရာ မလိုတော့ဘူး BUTTON တစ်ချက် နှိပ်တာ နဲ RESTART ကျ သွားပြီး
ONE KEY GHOST ကို downloadဆွဲ
ပြီးရင်...data တွေကို paste လုပ်ချင်တဲ့ hardisk ကိုတပ်
ONE KEY GHOST ကို ကလစ်နှိပ်လိုက်ရင်
သူ့ ဘာသာ ghost ဆွဲသွားမှာလားမသိဘူးနော်
11 Re: Ghost ရိုက်နည်း on 23rd January 2010, 7:22 pm
solakoko ပြော သလိုတော့ ကျွန်တော် စမ်း မကြည့်ရသေးပါဘူး၊။
12 Re: Ghost ရိုက်နည်း on 25th January 2010, 8:08 pm
ကျနော် (mrzingyi007) ပေးတဲ့ 0NE KEY GHOST လေးကိုစမ်းကြည့်တာတော့အိုကေတ၇်ဗျ
သူ့ ဘာသာသူ အော်တို လုပ်ပေးတ၇်
မဆိုးဘူးမိုက်တ၇်လို့ ပြောလို့ ၇ပါတ၇်
13 Re: Ghost ရိုက်နည်း on 21st March 2010, 5:42 pm
Motherboard brand , model no မတူရင် ghost ရိုက်လို့ရလား အဲဒါလေး ပြောပါအုန်း
14 Re: Ghost ရိုက်နည်း on 22nd March 2010, 8:19 am
ကျနော်ပြောဖို့နည်းနည်းကျန်သွားတယ်။ တကယ်လို့ ကိုယ့်မှာ Motherboard brand ,
model no: မတူဘူးဗျာ။ HDD ကလည်း မတူဘူး။ ဒါဆိုရင်တော့ ကိုယ် Ghost
ရိုက်ချင်တဲ့ file တွေကို ပထမဆုံး ghost image ဆိုပြီးအရင်ရိုက်ရမယ်။
ဒီနေရာမှာလည်း HDD ကြိးတစ်ခုလုံးကို Ghost Image အဖြစ်ရိုက်နိုင်သလို ၊
Partition တစ်ခုတည်းကိုပဲ Ghost Image ရိုက်လို့ရပါတယ်။ အဲဒီ့လို image
ရိုက်ပြိးမှ နောက် HDD တစ်လုံးထဲကို အဲဒီ့ Image ဆွဲထားတဲ့ Image File
လေးကို ပြန်ပြီး Ghost ရိုက်ပေးလို့လည်းရပါတယ်။
should check carefully [You must be registered and logged in to see this image.]
15 Re: Ghost ရိုက်နည်း on 22nd April 2010, 11:56 am
Motherboard brand model no မတူတာတူတာထက် ကျွန်တော်ကြားဘူးတာတော့ Chipset မတူရင် window မတတ်ဘူးလို့ ကြားဘူးပါတယ်.... Mother Board တွေဟာ Brand ကွဲတာနဲ့Chipset ခြင်းလည်းတူညီမှာမဟုတ်ပါဘူး တွေ့ နေကြ Chipset တွေကတော့ Intel, Sis နဲ့VIA
16 Re: Ghost ရိုက်နည်း on 16th May 2011, 11:10 am
ကျွန်တော်တစ်ခုလောက်မေးချင်လို့ပါ - -
HDD ကနေ Image ကိုရိုက်
Image ကနေ HDD ကို ကျွန်တော်ပြန်ရိုက်ဖူးပါတယ်
ဒါပေမဲ့ . . မရပါဘူး၊ ကျွန်တော်စမ်းတာကတော့ Laptop နှစ်လုံးကိုစမ်းတာပါ
Laptop ထဲကနေ External HDD ထဲကို
ရိုက်ထားတဲ့ Image file လေးကို
နောက် Laptop မှာတပ်ပြီးတော့
From Image to HDD ပြန်ရိုက်ပါတယ်
ရိုက်ပြီးလို့ Window စမ်းတပ်ကြည့်တော့ XP Loading Logo
ပေါ်လာပြီး ခဏပဲ ချက်ခြင်းပြန်ပျောက်သွားပါတယ်
အဲဒီ Window ကို Safe Mode ထဲကနေပြန်ဝင်ကြည့်တယ်
Driver File တွေမတွေ့ကြောင်းနဲ့ ဒီ Window ဟာ Hardware တွေနဲ့မကိုက်ညီဘူးဆိုတဲ့
မရဘူးဆိုတာတော့ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကျွန်တော်
အဲဒီလိုလုပ်ထားတာကိုမြင်ဖူးထားလို့ပါပဲ၊ မြင်ဖူးတယ်ဆိုပေးမဲ့ ကျွန်တော်
အကယ်၍ . . အစ်ကိုတို့အနေနဲ့သိပြီးသားဆိုရင်တော့ ပြန် Sharing လုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ် . . .
ကျွန်တော်ကတော့ Hiren's Boot and Recover CD ထဲမှာပါတဲ့
Norton Ghost 32 ကိုသုံးထားပါတယ်..
17 Re: Ghost ရိုက်နည်း on 24th May 2011, 1:51 pm
Nobody reply message!
Waiting! Waiting!Waiting! Waiting! Waiting! Waiting! Waiting! Waiting!
18 Re: Ghost ရိုက်နည်း